सुरक्षित रूपमा फेसबुक चलाउन जान्नैपर्ने ६ सेटिङ - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । सामान्यतया हामी फेसबुक त चलाउछौं, तर समय समयमा सेटिङ चेकजाँच गर्ने बानी हुँदैन । सुरक्षित रूपमा फेसबुक चलाउन यसको प्राइभेसी सेटिङ र अन्य जरूर कुराबारे ख्याल राख्नैपर्छ ।
कमजोर पासवर्डका कारण मात्रै फेसबुक अकाउन्ट जोखिममा पर्ने भने पक्कै होइन । तसर्थ कम्तिमा पनि दुई महिनामा एकपटक प्राइभेसी वा गाेपनीयतासम्बन्धी सेटिङ चेक गर्न आवश्यक छ ।
आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित गर्न केही समय छुट्याए मात्रै पुग्छ । फेसबुक अकाउन्टमा भएका के-कति सूचना तथा जानकारीलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने, अथवा गोप्य राख्ने भनेर सेटिङ मिलाउन सकिन्छ ।
आज हामी कम्प्युटरबाट फेसबुकमा उपलब्ध जानकारी तथा सूचनालाई सन्तुलित गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे चर्चा गर्दै छौं:
१. बलियो पासवर्ड राख्ने र टु फ्याक्टर अथेन्टिसियनको प्रयोग गर्ने
२. प्राइभेसी सेटिङ एन्ड टुल म्यानेज गर्ने
क-कसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मिल्ने र सूचना हेर्न मिल्ने भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ । प्राइभेसी सेक्सनमा उपलब्ध सबै अप्सनहरू चेक गरी मिलाउन सकिन्छ ।
३. पुराना पोष्टहरू पव्लिक बाट हटाउने
फेसबुकमा उपलब्ध अपडेटका आधारमा व्यक्तिगत विवरण बाहिरिन सक्ने हुँदा पुराना पोष्टहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ । फेसबुकका पोष्टलाई प्राइभेसी सेटअप गर्न प्राइभेसी सेक्सनमा गइरहनु पर्दैन । टाइमलाइनमा गएर सोझै एक-एक गरी कसले हेर्न मिल्ने भनी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
४. अकाउन्ट लगइन भएका डिभाइस परिक्षण गर्ने
५. फेसबुकको पहुँचमा भएका एपहरू जाँच गर्ने
फेसबुक अकाउन्टसँग लिंक गरी विभिन्न एपहरूमा अकाउन्ट चलाउन सकिन्छ । यसो हुँदा कतिपय एप फेसबुकले अस्वीकार गरेकाे हुन्छ, जुन सुरक्षाका हिसाबले जोखिमयुक्त भएका हुन्छन् । एप एन्ड वेबसाइटमा गएर एक्सपायर भइसकेका एप तथा वेबसाइट रिमुभ गर्नुपर्छ ।
६. लोकेसन हिस्ट्री डिलिट गर्ने
यदि तपाईं आफ्नो लोकेसन हिस्ट्री फेसबुकमा स्टोर नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लोकेसन शेयरिङ बन्द (टर्न अफ लोकेसन) गर्न सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौं । तपाईं नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने कति जीबी वाला र्‍याम भएको फोन
काठमाडौं । अहिलेको समयमा कुनै सेवा वा सामान चाहिएको अवस्थामा गुगलमा सर्च गरेर खोज्ने प्रयोगकर्ताको
एनसेल प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी सर्भिस कोडहरु
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहकको सहजताको लागि